Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » LGBTQ » Hudheelada Qatar ma rabaan 2022 dalxiisayaasha khaniisiinta ee Koobka Adduunka
Kooxaha u dooda xuquuqda LGBT+ ayaa si isdaba joog ah walaac xooggan uga muujiyay sida lammaanaha isku jinsiga ah loola dhaqmayo Qatar tan iyo markii waddanka la siiyay xuquuqda martigelinta Koobka Adduunka 2010.
Walaaca xuquqda khaniisiinta ayaa timid iyada oo qayb ka ah dhaleecayn badan oo ka timid go'aankii FIFA ay ku magacawday qaran kaas oo sidoo kale la kulmay eedaymo ku saabsan ku xadgudubka xuquuqda shaqaalaha muhaajiriinta ah halka ay dhiseen garoonkii iyo kaabayaasha loo baahnaa.
Koox saxafiyiin ah oo reer Yurub ah ayaa dhawaan soo saaray natiijada baaritaan madax banaan oo ay dhawaan sameeyeen kaas oo ay ku ogaadeen in ay wali jirto cadaawad aad u sareysa iyo cadaawad qaawan oo la xiriirta dadka isku jinsiga ah ee isku jinsiga ah marka ay timaado balansashada hoteelada. Qadar ka hor Koobka Adduunka 2022.
Inta lagu guda jiro baaritaankooda, saxafiyiinta ka kala socda warbaahinta dowladda ee Danmark, Sweden iyo Norway ayaa iska dhigay rag dhawaan guursaday oo qorsheynaya bisha malabka markii ay isku dayeen in ay qol ku qabsadaan 69 hoteel oo ku jira liiska rasmiga ah ee FIFA ee bixiyaasha lagu taliyey.
Inkastoo ay FIFA isagoo sheegay in qof kasta oo ka tirsan bulshada qaybaheeda kala duwan lagu soo dhawaynayo Qatar marka ay koobka aduunka Bilawga bisha November, saddex hudheel oo Qatari ah oo ku jira liiska FIFA ayaa si cad u diiday in la ballansado lammaanaha isku jinsiga ah iyagoo sabab uga dhigaya sharciyada Qatar oo sharci darro ka dhigaya khaniisnimada, halka labaatan kalena ay dalbadeen in lammaanaha khaniisiinta ah ay ka waantoobaan wax kasta oo ay ku muujinayaan jacaylka.
Hoteelada ku haray liiska FIFA ayaa sida muuqata wax dhibaato ah ku qabin ogolaanshaha lamaanayaasha isku jinsiga ah, sida lagu sheegay warbixin ay si wadajir ah u soo saareen NRK, SVT ee Sweden iyo Denmark DR.
Guddiga Sare ee Bixinta & Dhaxalka Qatar (SC), oo ah hay'adda u xilsaaran qabanqaabada Koobka Adduunka, ayaa ka warhaya natiijada warbixinta, waxayna sheegeen in Qatar ay tahay 'dal muxaafid ah', 'ay ka go'an tahay inay gaarsiiso FIFA World oo loo dhan yahay. Khibrad koob leh oo soo dhawaynaysa, badbaado leh oo la heli karo dhammaan.'
Isagoo ka faalloonaya baaritaanka, FIFA waxay sidoo kale shaaca ka qaadday inay kalsooni ku qabaan in dhammaan 'tallaabooyinka lagama maarmaanka ah' ay dhici doonaan marka uu Koobka Adduunka bilaabmo bisha November.
"FIFA waxay kalsooni ku qabtaa in dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ay u diyaarsan yihiin taageerayaasha LGBTQ+ si ay, sida qof kasta oo kale, u dareemaan soo dhaweyn iyo badbaado inta lagu jiro tartanka," ayay yidhaahdeen.
Guddiga FIFA Norway Qadar Iswidhan
Sahanka Safarka LGBTQ+ ee masiibada ka dib IGLTA waxay helaysaa Abaalmarinta CETT Alimara
Muuqaalka Suuqa Graters-ka Warshadaha ayaa daboolaya ganacsi cusub...
Ghana ayaa dib u furtay xuduudaha, kor u qaadaysa inta badan COVID-19
Felix Brambilla wuxuu leeyahay,
May 13, 2022 at 11: 05
Waxaan ahay Faransiis / Maraykan, anigoo dhowr jeer joogay Qatar. Hadda waxaan joogaa Dooxa dhowr maalmood. Qaar ka mid ah xubnaha kooxdayadu waa khaniis mana helin wax cadaawad ah mar kasta. Caawa, waxaan ku cunnay Nobu halkaas oo laba miis oo ragga khaniisiinta ah ay ahaayeen kuwo aad iyo aad u qosol badan. Qofna ma fiirin karo mana cuslan. Ku saabsan PDA, waddanku waa muxaafid mana horumariyo samaynta fagaare, iyadoon loo eegayn jinsiga ku lug leh.
Waxaan imid Qatar oo ay ka buuxaan fikrado taban laakiin tan iyo markii aan qaatay dhaqanka iyo qiyamka bulshadan oo ay ugu horreeyaan doorka haweenka.
Maqaalkani waxa uu tilmaamayaa 3 ka mid ah 69 hudheel oo leh kayd mawduuca marka si cad loogu sheego doorbidista galmada. Runtii wax weyn uma arko arrintan. Aynu diiradda saarno waxyaabaha togan ee ka dambeeya dhacdadii ugu horreysay ee heerkan oo kale ah ee dunida Carabta. Aan ka tanaasulno weedhaha oo aan soo dhaweyno fursadda aan isweydaarsanno oo aan ka yeelanno ra'yigeenna.